Nezve Chinyorwa - "Potato Sisitimu" Chinyorwa
kuru Nezve Magazini
Ruzivo-rwekuongorora interregional magazini "Potato system"
Icho chete chakaburitswa muRussia chinonyatso kukwana uye zvakakwana chakafukidza kurimwa, kuchengetwa, kugadzirisa uye kutengesa mbatatisi uye miriwo "borsch set". Iyo magazini inosimudzira chiitiko chevakanyanya kunaka Vagadziri veRussia uye zvave kuitwa nedzimwe nyanzvi dzekunze.
Vazhinji vateereri vebhuku iri misoro yemabhizimusi ekurima ematanho akasiyana; agronomists; vatungamiriri vematunhu nedunhu manejimendi, madhipatimendi ezvekurima; vamiririri vemakambani anotora chikamu mumusika wekurima; masayendisiti; vadzidzi veyunivhesiti dzekurima.
Magazini inoburitswa kana pagore.
Muna 2021, zvinyorwa zvina zvemagazini yePotato System zvichaburitswa.
Kwete 1, zuva rekuburitsa: Kukadzi 25
Nha. 2, zuva rekuburitsa: Chikumi 2
Nha. 3, zuva rekuburitsa: Gunyana 8
Nha. 4, zuva rekuburitsa: Mbudzi 19
Rinobuditswa runogovaniswa pamitambo inoratidzwa uye nekunyoreswa. Kubva 2015, vanyori vakatanga chirongwa che "Magazini yemahara", nekuda kwekuti chero purazi rekuRussia rakaita mukurima mbatatisi rine mukana wekugamuchira "Potato system" nenzira yakatarwa uye isina-mutengo. Kubva ipapo, nhamba yevanonyorera yakakura zvakanyanya.
Distribution geography - iyo yese yeRussia, zvikumbiro zvekunyorera zvinogara zvichibva mumapurazi muTrans-Urals, Altai Territory, iyo Far East neRepublic yeCrimea, asi chikuru kuverenga ndeche vagari vematunhu “mbatatisi” (Moscow, Nizhny Novgorod, Bryansk, Tula nedzimwe nzvimbo; Republic of Chuvashia uye Tatarstan).
Iro bhuku rinonyoreswa neFederal Service ye Supervision yeCommunication, Ruzivo rweTekinoroji neMisa Kutaurirana. Setifiketi PI Nhamba FS77 - 35134, Ndira 29.01.2009, XNUMX
Muvambi nemuparidzi: LLC Kambani Agrotrade
Mupepeti-in-mukuru: OV Maksaeva